यस्ताे छ कार्तिक महिनाकाे मासिक राशिफल – अकला देवीले सबैको कल्याण गरुन ! – Complete Nepali News Portal
यस्ताे छ कार्तिक महिनाकाे मासिक राशिफल – अकला देवीले सबैको कल्याण गरुन !
ज्योतिषः केशव गाैतम,
सूर्य तुला राशिमा, वृहस्पति बक्रि भएर धनुराशिमा रहने छ । शनी बक्रि भएर धनु राशिमा रहने छन् । मंगल कार्तिक महिना मीन राशिमा रहने छ । राहु वृष राशिमा, केतु वृश्चिक राशिमा रहन्छ । शुक्र कन्या राशिमा रहने छन् । बुध तुला राशिमा विचरण गर्ने छन् । तुला राशिमा चन्द्र रहेका समयमा महिना आरम्भ हुनेछ । कार्तिक १ गते घटस्थापना कार्तक १० गते सोमबारका दिन विजयादशमी परेको छ । कार्तिक २९ गते शनिबार लक्ष्मीपूजा परेको छ ।